Iinyosi zondliwe ngokutya, ukutya kuveliswa yimvula, imvula ivela kwidini, kwaye idini lenziwa ngesenzo. Yazi ukuba isenzo sivela kuMoya oPhakamileyo ongomnye; Kungoko wonke umoya ogcweleyo uhlala ukho ngamaxesha onke kwidini.
UKUTYA akufuneki kube kuyindawo eqhelekileyo kakhulu ukuba ibe yinto yokubuza intanda-bulumko. Abanye bachitha ixesha elininzi leeyure ezingamashumi amabini anesine emsebenzini ukuze bafumane imali eyaneleyo yokuthenga ukutya okufunekayo ukugcina umzimba kunye nomphefumlo udibene. Abanye bathandwa kakhulu bachitha ixesha elininzi becwangcisa into abaza kuyitya, ukuba iya kulungiswa njani, nokuba iza kubavuyisa njani kunye nezindlu zabahlobo babo. Emva kwexesha lokuchitha elisetyenzisiweyo ekondleni imizimba yabo, bonke bahlangabezana nethemba elinye, bayafa, babekelwa ecaleni. Umsebenzi osexesheni kunye nenkcubeko yenkcubeko, umthengisi othengisa iimpahla kunye nowesifashoni, umchebi nesicaka, isicaka nenkosi, umfundisi kunye nomfundisi, bonke banokufa. Emva kokondla imizimba yabo ngamayeza alula kunye neengcambu, ukutya okuyimfuneko kunye neendawo ezinobutyebi, imizimba yabo iphendle njengokutya kwezilwanyana namathafa omhlaba, iintlanzi zolwandle, iintaka zezulu, amadangatye umlilo.
Indalo iyayazi yonke imibuso yayo. Uhambela phambili ngeefom kunye nemizimba. Ubukukumkani ngamnye wakha imizimba yokufezekisa indaleko engezantsi, ukubonisa obu bukumkani bungaphezulu, kwaye uyiqaphele. Yonke indalo yenziwa ngamacala axhomekeke kwelinye. Lungu ngalinye linomsebenzi ophindiweyo, ukuba ube ngumgaqo wokufundisa kulapha ngezantsi, kwaye ube kukutya komzimba ongaphezulu kwalo.
Ukutya sisondlo okanye izinto eziyimfuneko ekubumbeni, ekusebenzeni nasekuqhubekeni, zalo lonke uhlobo lomzimba, ukusuka kwezimbiwa ezisezantsi ukuya kubukrelekrele obuphezulu. Oku kondliwa okanye izinto ezibonakalayo zihlala zijikeleza ngonaphakade ukusuka kwizinto ezinamandla ukuya kwiifom zekhonkrithi, ukusuka apho kulwakhiwo kunye nemizimba esebenzayo, de zibe ezi zilungisiwe kwimizimba yobukrelekrele namandla. Yiyo loo nto indalo iphela izondla ngokwayo.
Ngokutya izidalwa zamkela imizimba zize ehlabathini. Ngokutya bahlala emhlabeni. Ngokutya bashiya umhlaba. Akukho mntu unokuwuphepha umthetho wokubuyiselwa nokuhlawulwa kwayo njengoko indalo iqhubeka ukujikeleza ngokuqhubekayo kwizikumkani zayo, ibuyela kwinto eyayithathwe kuyo kodwa yathembela kuyo.
Ngokusetyenziswa ngokufanelekileyo kwemizimba yokutya kuyenziwa kwaye baqhubeke nokuziphendukela kwenqanaba lokukhula. Ngokusetyenziswa ngokungafanelekanga kokutya umzimba osempilweni uya kugula kwaye uphele kumjikelo wokufa.
Umlilo, umoya, amanzi, nomhlaba, zizinto, zezinto zobugqi, ezidibanisa kwaye zihambise kwilitye lekhonkrithi eliqinileyo kunye nezimbiwa zomhlaba. Umhlaba kukutya kwemifuno. Isityalo sabetha iingcambu zaso etyeni kwaye ngokomgaqo wobomi siqhuma sivuleke kwaye sikhethe ukutya okufunekayo ukwakha ulwakhiwo olutsha ngokwalo. Ubomi babangela ukuba isityalo sikhule, sivelise, kwaye sikhule sibe sesona simo sizibonakalisayo. Ukukhokelwa ngumnqweno wesilwanyana kunye nemfuno yesilwanyana eso njengokutya komhlaba, imifuno kunye nezinye izilwanyana. Ukusuka kumhlaba kunye nolwakhiwo olulula lwesityalo, isilwanyana sakha imizimba yaso entsonkothileyo. Izilwanyana, izityalo, umhlaba kunye nezinto, zonke zisebenza njengokutya komntu, uMcinga.
Ukutya zintlobo ezimbini. Ukutya okwenyama akuphuma emhlabeni, kwizityalo nakwizilwanyana. Ukutya kokomoya kuvela kumthombo okrelekrele kwindalo iphela apho okomzimba uxhomekeke kubukho bawo.
Indoda sisigxininisi, umlamli, phakathi kokomoya nokwenyama. Ngomntu ukujikeleza okuqhubekayo phakathi kokomoya nokwenyama kugcinwa kuphakanyisiwe. Izinto, amatye, izityalo, izirhubuluzi, iintlanzi, iintaka, amarhamncwa, abantu, amandla, nezithixo, zonke ezi zinto zinegalelo ekuxhaseni omnye komnye.
Emva kwendlela yendoda e-lemniscate igcina ukujikeleza kokutya ngokwasemzimbeni nangokomoya. Ngokweengcinga zakhe umntu ufumana ukutya kokomoya kwaye akudlulisele kwihlabathi elibonakalayo. Emzimbeni wakhe umntu ufumana ukutya okubonakalayo, okuphuma koko kuvela kuyo, kwaye ngengcinga yakhe unokukuguqula aze akunyusele kwihlabathi lokomoya.
Ukutya yenye yezona titshala ezilungileyo zomntu. Ukufuna ukutya kufundisa ukungazi kunye nokuvilapha isifundo sokuqala somsebenzi. Ukutya kubonakalisa i-epicure kunye nokudla ukuba ukondla ngokugqithisileyo kuya kukhokelela kwintlungu kunye nesifo somzimba; ngenxa yoko ufunda ukuzeyisa. Ukutya sisiseko sobugqi. Isenokungabonakali kangako kumadoda exesha lethu, kodwa kwixa elizayo indoda iya kubona kwaye iyayixabisa le nyani kwaye ifumane ukutya okuya kuguqula umzimba wakhe ube yenye ye-oda ephezulu. Isizathu sokuba ahluleke ukuyenza ngoku kungenxa yokuba akalawulwa ziinkanuko zakhe, akabakhonzi abanye abantu, kwaye akaboni thixo buzibonakalisa kuye.
Ukutya kufundisa indoda enengqondo ephangaleleyo ngemijikelezo kunye nokusesikweni. Ubona ukuba angathatha kwindalo ethile yeemveliso zakhe, kodwa ukuba unyanzelise kwaye atshintshe kumjikelo wakhe oguqulweyo ulingana nabo. Xa umthetho wobulungisa uthotyelwa emntwini uba nobulumko kunye nokuphakanyiswa kwezantsi kwiifom eziphezulu kuya kumngenisa ekungeneni kwihlabathi lokomoya apho athabatha khona ukuphefumlelwa.
Indawo yonke kukutya. Yonke indalo iyazondla ngokwayo. Umntu wakhela emzimbeni wakhe ukutya kwazo zonke izikumkani ezingezantsi, kwaye utya ngaphezulu kokutya kwakhe kokomoya ngexesha lokucamngca. Ukuba iyaqhubeka inkqubo yokuzivelela kwezinto, kufuneka yena anike umzimba wequmrhu elingaphezulu kwakhe. Eli ziko linengcambu yomzimba wakhe wesilwanyana kwaye liyinxalenye yokomoya ehlala ngaphakathi yomntu. NguThixo wakhe. Ukutya umntu anokubonelela ngako uthixo wakhe kwenziwa ziingcinga ezintle kunye nezenzo, izilangazelelo kunye neengcinga zobomi bakhe. Kukutya okuthi apho umzimba wenkolo-kaThixo wenziwe. Umphefumlo ekujikeni kwaso ngamandla okanye ngomzimba wokomoya anokusetyenziswa ngawo umgaqo wobuthixo kunye nobukrelekrele.